Ny morontsiraka tsara indrindra any Maroc | Vaovao momba ny dia
Ny morontsiraka tsara indrindra any Maroc
Ranomasina sy ranomasina | | Maraoka
La morocco morontsiraka tototry ny vala sy morontsiraka tsara tarehy ho an'ny tsiro rehetra. Tsy azo atao mihitsy ny manapa-kevitra amin'ny iray, noho izany ny zavatra tsara tokony hatao dia ny manao famerenana kely ireo izay heverin'ny mpizahatany ho tsara indrindra eto amin'ny firenena.
Manomboka amin'ny morontsirak'i Tangier Atlantika aloha izahay. Eto dia tsara ny manasongadina ny morontsirak'i Hercules Grotto, be atao mandritra ny volana Jolay sy Aogositra. Mazava ho azy fa mangatsiaka kokoa ny ranony noho ny any Morocco sisa. Eo amin'ny manodidina an'i Tangier dia manana ny Torapasika Larache, mety ho an'ny surfers noho ny onjany lehibe. Roa ora atsimo amin'ny alàlan'ny fiara ananantsika Dakhla, any Sahara Andrefana, iray amin'ireo morontsiraka hafa izay, na dia be olona aza mandritra ny fahavaratra, dia mandresy lahatra ny olona rehetra noho ny firavaka nentin-drazana amin'ny endriny.
Miverina any avaratr'i Maraoka, eo afovoan'ny Tendrombohitra Rif ary eo amin'ny morontsirak'i Mediterane dia manana ny Quemada de Al Hoceima. Toerana tena tsara sy mahafinaritra ary maro ny olona tonga ao. Tena akaiky eto dia ny morontsirak'i Esfiha, fantatra ambonin'ny zava-drehetra noho ny Nosy tsara Hispaniola izay hita avy eny amoron-dranomasina. Tsy morontsiraka tena mahazatra izy io satria raha vao miditra ny ranomasina ianao dia afaka mahita ny halaliny.
Ny morontsiraka iray hafa amin'ny morontsiraka Atlantika dia ny an'ny Ny Jadida, zato kilometatra atsimon'ny Casablanca. Ny iray amin'ireo morontsiraka atsimo indrindra any Maroc dia i Lalla Fatma. Tsy isalasalana fa iray amin'ireo morontsiraka malaza indrindra eto amin'ny firenena izy io, na dia manome torohevitra aza ny onjan-dranomasina amin'ny tsy tokony hipetrahana miaraka amin'ireo ankizy.
Ary farany, ny morontsirak'i Tangier, voahodidin'ny tendrombohitra sy trano fotsy, dia tsy maintsy asongadina tsy misy fisalasalana. Agadir, miaraka amina fotodrafitrasa fandraisam-bahiny mahafinaritra, sy Casablanca, iray amin'ireo paradisa fizahan-tany any Maroc. Ny ankamaroan'ny mpizahatany dia mizotra any amin'ireo tanàna telo ireo, na dia mendrika very ihany koa any amin'ireo zoro voalaza teo aloha.
Fanazavana fanampiny - Agadir, iray amin'ireo morontsiraka tsara indrindra any Maroc
Sary - Bugbog
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Africa » Maraoka » Ny morontsiraka tsara indrindra any Maroc